Modernized Oriental Technique of Accurate Astrology (MOTAA): June 2010
ဇာတာ တစ်စောင်ကို စစ်ဆေး တော့မည် ဆိုပါက -ပထမဦးစွာ အရေးကြီးဆုံး လုပ်ရမည့် အလုပ်မှာ- ဇာတာရှင်၏ မွေးချိန် မှန်ကန်မှုကို စစ်ဆေးရန် ဖြစ်ပါသည်။
ကျွန်တော်တို. မြန်မာနိုင်ငံတွင် ရှေးယခင် ဝေဒ ပညာရပ်များ ထွန်းကားစဉ် ကာလ များက- ကလေးငယ် တစ်ယောက် မွေးဖွား လာပါလျှင် - မိဘ ဖြစ်သူတို.သည် ကလေး မွေးဖွားသည့် အချိန်ကို (တောရပ် ဒေသများတွင်- နေ အမြင့်ဖြင့် လည်းကောင်း၊ မြို.ကြီး ပြကြီးများတွင်၊ ဗဟိုရ် စည်သံ၊ သို.မဟုတ်၊ အရိပ် ခြေဖ၀ါး အရေအတွက် ဖြင့်လည်းကောင်း၊) ရက်ချုပ်မှတ်တမ်း လေး ရေးမှတ် ပြီးနောက် မိမိနေထိုင်ရာ ကျေးရွာမှ- နက္ခတ်ပညာ တတ်ကျွမ်းသူ တို.ထံ သွားရောက်၍ ထန်းဖူး ဇာတာလေးများ ဖွဲ.ထားတတ်လေ့ ရှိခဲ့သည်။ သို.သော်လည်း- ဇာတာ ဖွဲ.ခြင်း သည် ထိုခေတ် အခါက- သူရိယ သိဒ္ဓန္တ ခေါ် လက်ရိုးဗေဒင် ကျမ်းကို တတ်ထားရန် လိုခြင်း၊ သို.မဟုတ် သံဒိဌ ပြက္ခဒိန် ခေါ် ဂြိုဟ်သွား ပြက္ခဒိန်များ ရှိရန် လိုခြင်း၊ အကယ်၍ ဇာတာဖွဲ. ထားပါက လည်း- ဇာတာဖတ်တတ်သူ ရှားပါးခြင်း၊ နောင်သော အခါတွင် မွေးချိန် မလိုသော မဟာဘုတ်၊ သက်ရောက် ဆိုသော နည်းများ ပေါ်ပေါက် လာခြင်း တို.ကြောင့် နောက်ပိုင်း မြန်မာတို.သည် ဇာတာဖွဲ. ရန် အသာထား၊ မွေးချိန်ကိုပင် မှတ်သား ရကောင်း မှန်း မသိကြတော့ပါ။
အင်မတန် နှမြောစရာ ကောင်းလှသော ဖြစ်ရပ် ဖြစ်ပါသည်။ တစ်နေ.တည်းတွင် ဆေးရုံ တစ်ခုတည်း တွင် ကလေးငယ် မည်ရွေ. မည်မျှ မွေးဖွား နေပါသနည်း။ တနိုင်ငံလုံးတွင်- တစ်နေ.တည်း တွင် ကလေးငယ် မည်မျှ မွေးနေပါသနည်း။ ဆိုပါစို.-တစ်ရက်တည်းတွင် မွေးဖွား သော ရာဇဘွား -ကလေးငယ် တို. အနေဖြင့် ကံကြမ္မာခြင်း၊ စိတ်ဓါတ်ခြင်း၊ စရိုက်ခြင်း တူကြပါသလား၊
တစ်နေ.တည်း၊ ၅-မိနစ်ခန်.သာ ခြားလျှက် မွေးဖွားလာသော အမွှာ ညီ၊အကို၊ မောင်၊နှမ တို.ပင် လျှင်၊ စရိုက်ခြင်း၊ စိတ်ဓါတ်ခြင်း ကွာခြား သည် သာမက- ၄င်းတို.၏ ဘ၀တွင် လုပ်ကိုင် စားသောက် ရသော လုပ်ငန်း၊ ကြီးပွားချမ်းသာမှု အနေအထား၊ စသည်ဖြင့် ကွာခြား နေကြ ပါလျှင်- ထိုထက်မက- တစ်ရက်တည်း၊ နာရီခြား၊ မြို.ရွာ ခြားပြီး မွေးဖွားလာ သူတို. ကွာခြားမှုကို ပြောဘွယ် မရှိတော့ပါ။
ထိုအခါ- စဉ်းစားတတ်သော သူအချို.အနေဖြင့် - ဗေဒင်ပညာကို အယုံအကြည် မရှိတော့ပါ။
နောက်ဆက်တွဲ အနေဖြင့်- မိနစ်၊စက္ကန်. အထိပင် တိကျ ရန်လိုသော နက္ခတ်ပညာကိုပါ တစ်ပါတည်း အထင်သေး လိုက် ကြပါတော့သည်။ ထို.ကြောင့် ရှေးပညာရှင်ကြီးများ ထိန်းသိမ်း စောင့်ရှောက်ခဲ့သော ပညာရပ်သည် မိမိကြောင့် အခြားသူ တို. အထင်မသေး စေရန်အတွက် ထိုပညာရှင်ကို လေ့လာသူ အားလုံးတွင် တာဝန် ရှိပါသည်။
MOTAA သည် မြန်မာ တို.အနေဖြင့် မိမိတို.တွင် ယခင်က ရှိခဲ့ဘူးသော အဆင့်မြင့် နက္ခတ္တ ပညာကို၊ မိမိတို. လက်တွင်း ပြန်လည် ရောက်ရှိ တန်ဘိုး ထားတတ်လာ အောင် အသိဥာဏ် ပေးလိုသည့် စနစ်ဖြစ်ပါသည်။
ဥပစ္ဆေဒက ကံဖြင့် သေဆုံးသူ - အချို.၏ ဇာတာများ။
ပါကစ္စတန် ၀န်ကြီးချုပ်ဟောင်း ဘနာဇီယာ ဘူတို ၏ ကံကြမ္မာ သုံးသပ်ချက်။
အမေရိကန် သမ္မတ ဂျွန်.ဖက်ဖ် ကနေဒီ
ဥပစ္ဆေဒက ကံဖြင့် သေဆုံးခြင်း ကို ဝေဒ ပညာဖြင့် လေ့လာဆန်းစစ်ခြင်း။
သေဆုံးခြင်း ဆိုသည့် စကားကို မည်သူမျှ မကြားချင်ပါ။ သို.သော် သက်ရှိသတ္တ၀ါ ရယ်လို. ဖြစ်လာပြီ ဆိုသည်နှင့် သေဆုံးခြင်း ကို မလွှဲသာ မရှောင်သာ ကြုံတွေ.ကြရမည် ချည်းသာ ဖြစ်ပါ၏။
သို.သော်လည်း - မိမိအနေဖြင့် ကြိုတင် ပြင်ဆင်ထားမှု မရှိပဲ- ရုတ်တစ်ရက် ချက်ခြင်း ကိုယ်ခန္ဓာ အစိတ်အပိုင်းများ မြင်မကောင်း ရှုမကောင်းပဲ သေဆုံးခြင်းသည်ကား- ပို၍ ဆိုးဝါး ပါသည်။ အဘယ့်ကြောင့် ဆိုသော်- အသိ ဥာဏ်ပညာ၊ ၀ိပဿနာ ရှုမှတ် ချိန်၊ မိမိပြုလုပ်ထား ခဲ့သော ကုသိုလ် ကောင်းမှုများကို ပြန်လည် ဆင်ခြင် သုံးသပ် ခွင့်မရလိုက်ပဲ-ဥပစ္ဆေဒက ဖြင့် ရုတ်တစ်ရက် သေဆုံး သွားခြင်းသည် ကောင်းရာ မွန်ရာ ရောက်စေရန် အတွက် အလွန် ခက်ခဲသောကြောင့် ဖြစ်သည်။ အနောက်တိုင်း နာမ်လောက ပညာရှင်များ အနေဖြင့်လည်း- ထိုကဲ့သို. ရုတ်တစ်ရက် သေဆုံးသွား သော သူတို.၏ ၀ိညာဉ် တို.သည် ချဉ်းကပ် တွယ်တာစရာ မရှိပဲ- တစ်ဝဲ လည်လည် လျှောက်သွား နေတတ်သဖြင့် ၄င်းတို.ကို “လမ်းပျောက် နေသော ၀ိညာဉ်များ” (Lost Soul) ဟု ခေါ် သော အနေ အထား ရောက်သွား တတ်သည် ဟု တစ်ညီတစ်ညွတ် တည်း ဆိုထားကြသည်။
ရှေးဟောင်း ပညာရပ်တို.၏ အနှစ်ချုပ် ဖြစ်သော ဗေဒင်နက္ခတ် ပညာတွင်- ဇာတာ တစ်စောင်ကို ကြည့်၍ ဤဇာတာရှင်သည် ထိုသို.သော ကံကြမ္မာနှင့် ကြုံမည် ဖြစ်ကြောင်းကို ဟောပြော နိုင်သည့် ပညာခန်း များ ပါရှိပါသည်။
သို.သော်လည်း မိမိကိုယ် မိမိ ခေတ်မီ ပါသည် သိပ္ပံနည်းကျ ပါသည်ဟု ထင်မြင်ကာ- သိပ္ပံပညာ နှင့် ၀ိဇ္ဇာ ပညာ တို.၏ နောက်ကွယ်မှ ဆက်စပ် ချက်များကို လည်း မသိမြင်သူ- အရေအတွက် က များပြား လာသည်က တစ်ကြောင်း၊ ဝေဒပညာ ကို ချေချေမြစ်မြစ် ကျွမ်းကျင် နှံ.စပ်သူ ပညာရှင် တို.နည်းပါး လာသည်က တစ်ကြောင်း၊ တစ်ဖန် သိလို၍ ဗေဒင် သွားမေးပြန်လျှင်လည်း စီးပွားရေး၊ စားဝတ်နေရေး အတွက်- သာ ဦးစားပေး ဟောကြားနေကြရပြီး- တစ်ကယ့် ပညာခန်းများကို ကမ္ဘာနှင့် ရင်ဘောင်တန်း လိုက်နိုင်အောင် သုတေသန ပြုလုပ်နိုင်သူ ပညာရှင် တို. မရှိသလောက် ကင်းမဲ့လာခြင်းကြောင့် တစ်ကြောင်း၊ ယခု အခါ လွန်စွာ တန်ဘိုးကြီးမားသော ရှေးပညာ တို.သည် လူအများစုနှင့် ကင်းကွာလာခဲ့ရပါသည်။
MOTAA စနစ်သည် မူလကျမ်း တို.၏ စာမျက်နှာမှ စာလုံးများ၊ စာပိုဒ်များ ကို သာ လေ့လာခြင်း မဟုတ်ပဲ၊ ၄င်းတို.၏ နောက်ကွယ် မှ ဆက်စပ်မှုများကို နက်နက် ရှိုင်းရှိုင်း လေ့လာပြီးနောက်၊ Statistical Analysis, Factor Analysis နည်း စနစ်များ ဖြင့် ခေတ်မှီ ကွန်ပျူတာကို အသုံးပြုထားသည့် သုတေသန ကို အခြေခံသော နည်းစနစ် ဖြစ်သောကြောင့် ရှေးပညာ တို.ကို ပြန်လည် ဖေါ်ထုတ်ထားသော နည်းစနစ် ဖြစ်သည်။